पुँजीवादी क्रान्तिबिना आएको पुँजीवादले जात व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्न सक्दैन – हाम्रो देश
जुन समुदायमा पेशा धेरै गराइएको छ, त्यहाँ जात धेरै हुन्छन् । ब्राह्मणमा जात कम हुन्छ किनकि उसको पेशा धेरै छैन । तर सबैभन्दा बढी जात वैश्य र शुद्रमा हुन्छ । श्रम क्षेत्र बढ्दै जाँदा उनीहरुका जात पनि धेरै देखापर्छन् । त्यसकारण श्रम समुह वा पेशागत समुह विभक्त हुनु पनि ठूलो कुरा होइन । संसारभरि जनसङ्ख्या बढेपछि पेशा बढ्छ । समुहहरु पनि बढ्छन् ।जात व्यवस्थाको मुख्य कुरा के हो ? त्यो भनेको वंशाणुगतमा अनुल्लङ्घनीय अर्थात् उल्लङ्घंन गर्न नपाइने पेशा हो । बाजे–बज्यैले जे पेशा गरेका छन्, उसको नाती नातिनीले पनि त्यही पेशा गर्नुपर्ने र पुस्ता दरपुस्ता त्यसैमा अड्किराख्नुपर्ने भयो ।
एउटा मानिस भैतिकवादी भएर पाँच वर्ष, दश वर्ष भाषण गर्दै हिँड्छ र साँझ बाँसको झागमा जाँदा, झड्याङ्ग, झसङ्ग हुन्छ । त्यहाँ प्रकट भयो भौतिकवादीको सत्व । उसलाई पनि थाहा हँुदैन कहाँ लुकेको थियो त्यो ।संस्कृतिको त्यो गहराईमा छ यो । त्यसकारण यसको विरुद्ध दुई ÷तीन किताब पढेर प्रवचन गरिन्छ, त्यो यति फितलो हुन्छ कि उसलाई घर पुग्ने बित्तिकै, आमा देख्नेबित्तिकै डर लागिहाल्छ । भाषण गरेर आएको छ जातव्यवस्थाका विरुद्ध, आमा, हजुरबा देख्नेबित्तिकै आफ्नो साथीलाई भन्छः हजुरबा त खत्तम छ, मान्दैन । अर्थात् त्यो सत्व प्रकट हुन्छ ।
अहिलेसम्म जात व्यवस्था उन्मूलन गर्नका लागि संसारमा आएका अवधारणा के के हुन् त ? योभन्दा अगाडि सबैभन्दा ठूलो स्वरले चिच्याएको र धेरै मेहेनत गरेका अम्बेडकर नै हुन् । तर एक दुई शब्दमा भन्ने हो भने उनको निष्कर्ष भनेको धर्म परिवर्तन हो ।धर्म परिवर्तनबाट हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त ७० वर्षको भारतको इतिहासबाटै देखियो । उहाँको उदाहरणलाई हेर्दा पनि त्यो बाटो होइन । नेपाललाई हेर्दा त झन प्रस्ट भयो । नेपालमा त बुद्धिस्टहरु पनि जात व्यवस्थामा गए । तामाङ र बज्रयानी नेवारहरु पनि गए । उनीहरुले पनि जात व्यवस्था त मज्जाले माने । दक्षिण भारतको इशाइहरुको स्थिति हेर्याे भने उनीहरुलाई दलित इशाइ भन्न थाले ।
आज अन्तराष्ट्रिय स्तरमा व्यापार गर्ने एनआरएनको मानिस आउँछ । उसले पनि सबैभन्दा पहिले जात नै सोध्छ । यो जात कहाँबाट आयो ? ऊ कुनै पुँजीवादी क्रान्ति गरेर सामन्तवादका विरुद्ध लडेर पुँजीपति भएकै होइन । ऊ त आफूले पाएका बिर्ता बेचेर नेपाल ग्यास खोल्न आएको हो । पुँजीवादी क्रान्ति गरेर र लडेर आएको पुँजीपति वर्ग नभएको हुनाले त्यसले सामन्तवादबाट रहेको जात व्यवस्था र शोषणकारी चरित्रलाई पनि पुँजीवादमा समेत जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोज्दो रहेछ । त्यसलाई शासनको हतियार बनाउँदो रहेछ ।जातको नारा चुनावमा खपिनसक्नुछ । खरब खरब भ्रष्टाचार गर्नेहरु पुँजीपति आइसक्यो । तर, चुनावामा नारा दिन्छन् आफ्नो जातको । भनेपछि जातव्यवस्था विरुद्ध पुँजीवाद जाने त कुनै छाँट नै छैन, भएन । त्यसलाई नयाँ नयाँ कलेबरबाट जोगाइराख्ने काम मात्र भएको छ ।